Efa voalahatra io | NewsMada
Efa voalahatra io
Par Taratra sur 28/08/2018
Mbola ambentin-dresaky ny olona, hatramin’izao, na tsy malaza loatra aza, ny fifidianana izay ho filoham-pirenena, hotanterahina afaka roa volana. Efa samy mahafantatra ny filaharany avy ireo kandidà, miisa 36, sy ireo mpomba azy avy. Samy manana ny andikany izany anefa ny tsirairay.
Ny azo antoka aloha, zavatra efa voalahatr’Andriamanitra io fa tsy misy afaka mandika izany, na iza na iza. Toy ny fanendrena io, izay tian’Andriamanitra ihany no ho lany eo, na firy ny nomeraon’ny kandidà na firy. Natao halahatra mantsy ny olombelona fa tsy ho mpandahatra velively. Efa voalahatra hatrany am-boalohany ireo isa ireo fa tsy misy antony loatra. Tsy misy afaka hibaiko an’Andriamanitra amin’ny fandaharany, raha mbola zavamananaina eto ambany masoandro.
Efa fantany sy voalahatra izay ho lany hitondra an’i Madagasikara, na tsy miteny mivantana aza Izy. Samy olony avokoa ireo kandidà 36 ireo, saingy misy fepetra takin’Andriamanitra amin’ny tsirairay ka eo ny hiavahan’izy rehetra. Aoka kosa anefa tsy hohadinoina fa samy mpanompony sy Malagasy avokoa ireo mpifaninana ireo ka tsy tokony hifanaratsy sy hifanimba.
Olona hanatanteraka ny didiny sy ny sitrapony no tiany fa tsy hanao valifaty sy otripo ary fandrafiana. “Tiava ny fahavalonao, ary mivavaha izay manenjika anareo”, hoy i Jesoa Kristy, tamin’ny mpianany.
Na izany aza, tsy fieren’ny jiolahy ny fivavahana. Samy mitonona ho tia an’Andriamanitra sy kristianina avokoa izy 36 mianadahy mianaka, saingy izay manam-pahendrena ka mahay mamela ny heloky ny sasany no ho hahazo ny famonjena ka hafahana ary hizara izany ho an’ny olona rehetra. Izy ilay efa voalahatra ka tsy hisy haharombaka ny satroboninahitra efa natolotr’Andriamanitra azy.